Fandehanana any Roma mankany Paris By Highspeed Train | Save A Train
Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > Fandehanana any Roma mankany Paris By Highspeed Train
Paris sy Roma any an-tampon'ny dia lavitra efa ho ny siny rehetra lisitra. Ireo tanàna malaza mahatalanjona noho ny kolontsainy, izao tontolo izao-kilasy nahandro, lafatra maritrano sy ny sisa maro hafa. Raha Rome sy Paris lavitra masina, izy ireo tsara mifandray amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. Midika izany fa tsy maintsy misafidy eo ireo tanàna tsara tarehy, dia afaka mitsidika azy ireo izy roa! Mba hanampiana anao hanao izany dia araka izay mahafinaritra araka izay azo atao isika hizara aminareo ny fomba hahazoana any Roma mankany Paris amin'ny Highspeed Train.
Travel ny fiarandalamby haingam-pandeha
Afaka haingana amin'ny alalan'ny Frantsa sy Italia ihany no mampiasa fifandraisana haingam-pandeha. Iray amin'ireo fomba haingana indrindra sy mampahazo aina indrindra amin'ny fivezivezena avy any Roma mankany Paris ny fandraisana ny Thello fiaran-dalamby haingam-pandeha. Fiaran-dalamby io ankehitriny dia whisk an'i Paris tsy fotoana. voalohany, dia haka lamasinina haingam-pandeha mankany Roma mankany Milan sy Milan ianao mankany Paris amin'ny lamasinina Thello. The Travel fotoana izao diany miovaova, arakaraka izay ny hitaiza anao handray. Manoro hevitra anareo izahay boky mialoha ny toerana toy ny tsy maintsy manao famandrihan-toerana ho an'ny fiarandalamby ireo mba hahazoana seza.
Alao ny Toerana mahafinaritra lalana – Roma mankany Paris amin'ny Highspeed Train
Miankina amin'ny làlan-kevitra izay nanapahanao hevitra fa rehefa mandeha avy any Roma mankany Paris ianao amin'ny lamasinina highspeed, mety te ho tia mamantatra tsara tarehy iray amin'ireo tanàna any Frantsa teny an-dalana. Nice soaks ny fahamboniany ny Provence ary mizara izany amin'ny alalan'ny tsara tarehy tora-pasika, velabelarina be Toerana fitsangantsanganana sy misokatra-rivotra tsena. Mijanona eny amin'ny Nice dia hamela anao hahita mahavariana iray hafa anisan'ny Frantsa ka handrava tsara anefa ny niala tao Roma ho any Paris.
Tsidiho ny tanàna eoropeanina hafa teny an-dalana
Ataovy indrindra ny fahafahana amin'ny alalan'ny fampiasana faritra fiarandalamby ary nijanona eny amin'ny hafa Eoropa tanàna. Travel avy tany Roma ho any Milan, tao Geneva eo anatrehanao tonga amin'izay halehanao – Paris.
No fiaran-dalamby Tsidika dia ny ora efatra ela. Izany no mahatonga ny tonga lafatra izany lalana na inona na inona izay tsy tiany lava be mpisantatra mitaingina fiaran-dalamby. Tsara ny hitondra ao an-tsaina fa misy tanàna lafo kokoa noho ny hafa mba hitsidika, ka arakaraka ny teti-bola mety kokoa ny lala andehana tsy tafiditra ny tanàna rehetra notanisainay. Zahao ny tranonkalantsika ary afaka manao ny fandaharam-potoananao manokana ianao mba hahazoana anao avy any Roma mankany Paris amin'ny lamasinina highspeed fa avy any Paris mankany Roma miaraka amin'ilay lalamby mitovy. Azonao atao ihany koa ny mampiaraka foana amin'ny farany fisondrotana eo amin'ny Facebook, Twitter ary Instagram pejy.
Mieritreritra ny hanao izany lalana avy any Roma ho any Paris ny tenanao? Mandeha SaveATrain Online hijery manokana ny manjo rehetra sy ny manaraka manomboka mieritreritra traikefa nahafinaritra!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-get-from-rome-to-paris-by-train%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)